ဂမ်လန်ရာဇီ အကြိုရင်ခုံသံ | Climb O'Clock
← ချစ်သော အစ်ကိုသို့ (သို့) ကျွန်တော်တို့ရင်မှာအမြဲတမ်း ရှင်သန် နေ သော တောင် တက် သမား တဦး (မှ- ညီငယ်တစ်ဦး)
အိမ်မက်မဟုတ်တော့တဲ့ ဂမ်လန်ရာဇီ →
Posted on August 8, 2013	by climberdoelone
ဂမ်လန်ရာဇီ ရေခဲတောင် ကို မြန်မာ-ဖုံရင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းရဲ့ တောင်တက်ခရီးစဉ်အနေနဲ့ မြန်မာ – အမေရိကန် ပူးပေါင်းတောင်တက်အဖွဲ့ဟာ မကြာမီ တက်ရောက်ကြ တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂမ်လန်ရာဇီ ရေခဲတောင် (၅၈၅၀မီတာ / တစ်သောင်းကိုးထောင့်တစ်ရာ့ကိုးဆယ့်နှစ် ၁၉၁၉၂ပေ) ဟာ အရှေ့ တောင်အာရှရဲ့ ဒုတိယ အမြင့်ဆုံးတောင် ဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယအမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ……………….
မြန်မာအမြင့်ဆုံးနဲ့ အရှေ့ တောင်အာရှရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ ခေါင်မိုး အမြင့်ဆုံးတောင် ကတော့ အမြင့်ပေ။ (၅၈၈၁ မီတာ / ၁၉၃၁၅ပေ) မြင့်တဲ့ ခါကာဘိုရာဇီ တောင်ထိပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ( နောင်မွန်းမြို့နယ် ကချင်ပြည် နယ် မြောက်ဖျားမြန်မာပြည်) မှာတည်ရှိပါတယ်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ရက်နေ့ အချိန်။ နေ့လည် ၃း၁၂မိနစ် မှာ မြန်မာနိုင်ငံသား တိဘက်လူမျိုး လမ်းပြ နမားဂျွန်စင် နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံသား တောင်တက်သမား အိုဇာကီ ( ကွယ်လွန်) တို့ တောင်ထိပ်ကို အောင်မြင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဧဝရတ်တောင်ထိပ်အပါအဝင် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ် များဖြစ်တဲ့ မီတာ ၈၀၀၀နှင့်အထက် တောင်ထိပ်များစွာကို အခေါက်ခေါက်အခါခါ အောင်မြင်စွာ တက်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်တောင်တက်သမား အိုဇာကီဟာ သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ခါကာဘိုရာဇီ တောင်ထက် ဂမ်လန်ရာဇီက တက်ရောက်ရန်ပိုမိုခက်ခဲတယ်လို့တရားဝင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကွန်တိုမြေပုံများ တောင်ရဲ့ ဓာတ်ပုံများနဲ့ (Aerial Photo/ Satellite Images) ဂြိုဟ်တု ဓာတ်ပုံများကလည်း ထိုအဆိုကို သက်သေထူလျက်ရှိပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာ အလွန် ကောင်းပြီးတိုက်ဆိုင်တဲ့ အချက်တခုက ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင်တွေ တိုက်ကြီးတွေ နိုင်ငံတွေရဲ့ အမြင့်ဆုံးတောင်တွေ အသီးသီး ရှိကြတဲ့ အထဲကမှ ထိုတောင်တွေထက် အမြင့်ပေ အနည်းငယ်သာ ပိုနိမ့်တဲ့ ဒုတိယအမြင့်ဆုံးတောင်တွေက ထိုအမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့ တောင်တွေထက် တောင်ထိပ်ကို တက်ရောက်ရန် ပိုမိုခက်ခဲလေ့ရှိတဲ့ အစဉ်အလာရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး Everest (aka) Big E ဧဝရတ်တောင်ထိပ်ထက် ကမ္ဘာ့ဒုတိယအမြင့်ဆုံး ကေတူး(K2) တောင်ထိပ်က တက်ရောက်ရန်ပိုမိုခက်ခဲပါတယ်
အာဖရိကတိုက်ရဲ့ ခေါင်မိုးကီလီမန်ဂျာရို Mt.Kilimanjaro တောင်ထက် Mt.Kenya ကန်ညာ တောင်ထိပ်ဟာ ပိုခက်ပါတယ်
အပေါ်မှာ စကားဦးသန်းထားတဲ့ တိုက်ဆိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အတိုင်းပါပဲ အရှေ့ တောင်အာရှရဲ့ ဒုတိယ အမြင့်ဆုံး ဂမ်လန်ရာဇီ ရေခဲတောင် ဟာ အရှေ့တောင်အာရှ ခေါင်မိုး ခါကာဘိုရာဇီ တောင်ထိပ်ထက်ပိုမို ခက်ခဲတဲ့ အစဉ်အလာကို ဆက်လက်ထိမ်းသိမ်းထားတာဟာ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါတယ်
( လူသူအရောက်အပေါက်မရှိသေးတဲ့ တောင်ထိပ်တွေကို (Virgin Peak ) အပျိုစင်တောင်လို့ ဥပမာ အလင်္ကာမြောက်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်လေးနဲ့ တင်စားသုံးနှုန်းလေ့ရှိပါတယ်)
ခုလည်း အပျိုစင် အပျိုရိုင်း အပျိုခက်ထန်လေး.…. မာရည်ကြောရည်နဲ့ မာနကြီးတဲ့……မာယာများ ပြီး (ရာသီဥတု) အပြောင်းအလဲများတက်တဲ့……… ဒေါသတကြီးနဲ့ (ဝေါကနဲ ရေခဲတွေ) ရုတ်တရက်ပြိုဆင်းပေါက်ကွဲတက်တဲ့ ဂန်လမ်အပျိုစင်လေး နဲ့ သဘာဝ အတားအဆီး အဟန့်အတားတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားမဲ့ သတ္တိခဲ တောင်တက်သမားတွေ့ရဲ့ အားပြိုင်မှုဟာ (ကျွန်တော်တို့လို မြန်မာ့တောင်တက်အရေးစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်တော့ ဒီတောင်တက်ခရီးစဉ့် လျှောက် ဩဂုတ် စက်တင်ဘာ လ နှစ်လစလုံး) ရင်ခုံလှိုက်မော စောင့်ကြည့်စရာ အံ့အောမှင်သက်စရာ အားပေးဆုတောင်ဖွယ်ရာ ခရီးစဉ်ပဲ မဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ………………………………………………………………………………………
ခရီးစဉ်………အရှေ့ တောင်အာရှရဲ့ ဒုတိယ အမြင့်ဆုံးတောင် ဂမ်လန်ရာဇီ ရေခဲတောင်ထိပ်(၅၈၅၀မီတာ / တစ်သောင်းကိုးထောင့်တစ်ရာ့ကိုးဆယ့်နှစ် ၁၉၁၉၂ပေ)ဂမ်လန်ရာဇီ ရေခဲတောင်တက် ခရီးစဉ် (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၁၃ မှ ၂၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃ ထိ ခန့်မှန်း၄၂ရက် )
တောင်တက် အဖွဲ့ဝင်များ ကတော့…………….အန်ဒီတိုင်စန်၊ မော်လီတိုင်စန်၊ ခရစ်နန့်(စ) ၊မာက်(ခ) ဖစ်ရှာ၊ ဝင်းကိုကို ၊ ပြည့်ဖြိုးအောင် အဲ့ရစ် ဒတ် ……….. ကိုသက်ထွန်း ၊ ဇေယျာထွန်း ၊ နမားဂျွန်စင် (ပူတာအို) ယောဆတ်(ပူတာအို) ကိုစိုင်း(ပူတာအို) ကိုစန်းဝင်းကျော် စိုးသူဝင်း ဝင့်ဖြိုး ရဲမင်းသူ တင်ဝင်းထွဋ် ဝေယံမောင်မောင်သန်း ဒေါက်တာ ကောင်းသန့်ကျော် တို့သွားရောက်ကြမှာပြဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးစဉ် အသေးစိတ် Update သီတင်းများကို
Facebook ရဲ့ Gamlang Razi စာမျက်နှာမှာ အသေးစိတ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် https://www.facebook.com/GamlangRazi
Twitter အကောင့် http://twitter.com/GamlangRazi စာမျက်နှာမှာ အသေးစိတ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်
Photo Credit to GamlangRazi Official page, can read more GML expedition updates by liking the page https://www.facebook.com/GamlangRazi
This entry was posted in Gamlangrazi, Mountaineering, News and tagged Mountaineering, Myanmar Climbing. Bookmark the permalink.